Qaramada Midoobey oo shaacisey inta Qof ee ku barakacdey dagaalada Gaalkacyo. | Baydhabo Online
Qaramada Midoobey oo shaacisey inta Qof ee ku barakacdey dagaalada Gaalkacyo.
Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in dagaalka Puntland iyo Galmudug ku dhex marayo magaalladda Gaalkacyo inay ku geeriyoodeen ugu yaraan 11-qof, kuna barakaceen 50,000 o okalee.
Hadal qoraal oo ka soo baxay Xafiiska QM ee Isku-xirka Hawlaha Samafalka ee OCHA ayaa lagu sheegay inay colaadahaasi hubeysan saamayn ku yeesheen Xaalladda Ammaanka, gaar ahaan Nolosha ay ku nool yihiin Dadka Barakacayaasha ee ku noolaa gudaha iyo daafaha Gaalkacyo.
Dagaalkaasi ayaa la sheegay inuu ku salaysan yihiin Muran dhinaca Deegaanka, iyadoo Maamulka Puntland doonayaan inay Maxjar ka dhisaan Galbeedka Gaalkacyo, halka Maamulka Galmudug ka soo horjeedaan Dhismahaasi.
Dhinaca kale, Ra’isul-wasaaraha Xukuumadda Federalka, Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, ayaa dadaal ugu jira sidii uu Labada Maamul ugu qancin lahaa inay joojiyaan colaadda, khilaafkoodana ku xaliyaan Wada-hadal Nabadeed.
Ra’isul-wasaaraha waxa uu maanta magaalladda Garowe kulan kula leeyahay Madaxweynaha Puntland, C/weli Maxamed Cali Gaas, wuxuuna Ra’isul-wasaaruhu shalay kulan la yeeshay Madaxweynaha Galmudug, C/kariim Xuseen Guuleed.
Sidoo kale, Saaxiibadda Somalia ayaa klu baaqay in la joojiyo dagaalkaasi, waxayna Labada Maamul ugu baaqeen inay is-xakameeyaan iyo inay Ciiddankooda ka saaraan gudaha Gaalkacyo.